Bike Racing 2018 - Extreme Bike Race 100.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 100.2 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ၿပိဳင္ပြဲ Bike Racing 2018 - Extreme Bike Race
Bike Racing 2018 - Extreme Bike Race ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ 2018 စက်ဘီးပြိုင်ပွဲခြင်း simulation လောကီသားတို့သည်အထဲတွင်နောက်ဆုံးပေါ်။ ယင်းစိတ်ကူးနှင့်အလွန်စွန့်စားဆိုင်ကယ်ဂိမ်းအဘို့အဆင်သင့်ရယူပါ။ လူမျိုး, အံ့ဖွယ်နယ်စပ်လမ်းကြောင်းများမှတဆင့်သင့်လမ်းနှင့်အခြားအရူးပြိုင်ဘက်ခုန်ခြင်းနှင့် crash ။ သင့်အနေဖြင့်စစ်မှန်သောကမ်ဘာပျေါတှငျဒါအစာရှောင်မောင်းဝံ့ဘယ်တော့မှ! မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်စွာမြန်နှုန်းနှင့်သင်၏မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုထိန်းချုပ်!
ရုံနဲလှည့်ကွက်ဖျော်ဖြေဘို့တည်အရှိဆုံးအံ့မခန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်စီး။ , အဆိုပါရူပဗေဒလက်တွေ့ဖြစ်ကြပြီးသင်ရုံအတားအဆီးကိုရှောင်ရှားနှင့်အချိန်အတွင်းစီးနင်းရဲ့အပြီးသတ်လွန်းသင့်ရဲ့စက်ဘီး / မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုရှေးခယျြရ။ စက်ဘီးပြိုင်ပွဲ 2018 အမြန်နှုန်းနှင့်အဆင့်မြင့်အာဏာကိုဘရိတ်ကျော်အစာရှောင်ခြင်းအရှိန်အဟုန်ထိန်းချုပ်မှုရှိပါတယ်။
အဆိုပါဂိမ်းမော်တော်ဆိုင်ကယ်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အတူတဦးတည်းကိုအကောင်းဆုံး 3D ဂရပ်ဖစ်ရှိပါတယ်။ သငျသညျမူရင်းနှင့်မတော်တဆမှုများကဲ့သို့တန့်မှာလည်းဒါသတိထားမောင်းနှင်ရမည်ဖြစ်ပျက်မည်, အစစ်အမှန်အခြေစိုက်ဖုန်ဂိမ်းများ၏ခံစားချက်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ အလွန်ဆွဲဆောင်မှုခံစားကြည့်ပါနဲ့လှလှပပဒီဇိုင်းစက်ဘီးပြိုင်ကားအပုဒ်။
အံ့သြဖွယ်သဲကန္တာရလမ်းများ, လမ်းပိတ်ထားတောင်နှင့်မြို့လမ်းများပေါ်တွင် curvy လမ်းကြောင်းအားဖြင့်သင်တို့၏ဆိုင်ကယ်စီးဒါပေမယ့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အလှည့အပေါ်သတိပြုရကြမည်။ သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးဆိုင်ကယ်ပြိုင်ကားသမားဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြ။ လာပြီးနှင့်ခုန်နှင့်ပြည့်စုံအကြီးအကျယ်အားကစားကွင်း, မှတစ်ဆင့်တစ်ဦးဖုန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားခံစားရသည်။ သင်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်နှင့်သင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ် daredevils သင်တန်းဖြည့်စွက်နိုင်ပါသလား? ထိုအခါယခုအတိုင်းစက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲနှင့်အတူတစ်ဦးစီးနင်းယူပါ!
- Amazing ပြိုင်ပွဲစက်ဘီး၏တန်ချိန်
- Amazing 3D ပတ်ဝန်းကျင်
- ပျော်စရာ Unlimited
- လက်ရှိအချိန်ကစားသူအများအပြား mode ကိုမကြာမီလာမယ့်။
Install "စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲ 2018" အခုသင်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပြိုင်ကားစွန့်စားမှုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။
Bike Racing 2018 - Extreme Bike Race အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Bike Racing 2018 - Extreme Bike Race အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Bike Racing 2018 - Extreme Bike Race အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Bike Racing 2018 - Extreme Bike Race အား အခ်က္ျပပါ
discorally စတိုး 211 130.12k
Bike Racing 2018 - Extreme Bike Race ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Bike Racing 2018 - Extreme Bike Race အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 100.2
Bike Racing 2018 - Extreme Bike Race APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ